FIFA oo 48 ka dhigtay dalalka ka qeybgalaya Koobka Aduunka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSportsFIFA oo 48 ka dhigtay dalalka ka qeybgalaya Koobka Aduunka
FIFA oo 48 ka dhigtay dalalka ka qeybgalaya Koobka Aduunka
January 10, 2017 Puntland Mirror Sports 0
FIFA oo 48 ka dhigtay dalalka ka qeybgalaya Koobka Aduunka. [Sawirka: Archive]
Geneva-(Puntland Mirror) Ururka maamula kubada cagta caalamka ee FIFA ayaa maanta oo Talaado ah u codeeyay kordhinta tirada qaramada ka qeybgalaya Koobka Aduunka iyadoo awal ay ahaayeen 32 ayaa hadda laga dhigay 48.
Isbadalka ayaa imaan doona sanadka 2026-da, sida ay xaqiijisay FIFA.
FIFA ayaa sheegtay in loo qeybin doono dalalka 16-group oo group walba ay ku jiraan saddex dal.
Dalka Ruushka ayaa martigelin doona sanadka 2018-ka, dalka Qatar ayaa iyana martigelin doonta 2022-ka, balse dalka martigelinaya 2026-da wali lama sheegin.
Kordhinta FIFA, ayaa la filayaa in ay siyaadiso dalkhliga ilaa $ 1 bilyan.
July 21, 2016 Isku-aadka afar dhamaadka ciyaaraha maamul goboleedyada Soomaaliya oo la soo saaray
December 5, 2017 Isku aadka tartanka kubada cagta maamul goboleedyada Soomaaliya oo la sameeyay
September 21, 2017 Kooxda kubada cagta Puntland oo bilaabay tababar si ay ugu diyaargaroobaan tartanka kubada cagta maamul goboleedyada Soomaaliya
February 6, 2017 Cameroon oo ku guulaysatay koobkeedii shanaad ee Koobka Qaramada Afrika
Mogadishu-(Puntland Mirror) Somali President Hassan Sheikh Mohamoud has condemned the recent terrorist attack in France. “On behalf of the Somali Federal Republic and the people of Somalia, we join the world in condemning the [...]
Mowsil-(Puntland Mirror) Ciidamada Ciraaq ayaa dib u la wareegay magaalada Mowsil, sida ay sheegayaan wararku. Raysulawaaraha Ciraaq Haidar al-Abad ayaa maanta oo Axad ah tagay gudaha magaalada Mowsil si uu uga qeybgalo dabaaldega guusha laga [...]